Download North American F-100C Super Sabre CWDT FSX & P3D - Freeware
Nke a bụ F-100 Super Sabre otu onye mgba mgba ọkụ mbụ nke American (ụgbọ elu mbụ na 1955), nke a add-on bụ ntụgharị nke ala maka FSX Mgbatị dakọtara Prepar3D v4 +. Ejiri ọtụtụ ihe ngosi, kọmpụta mebere nke ọma, ogwe 2D, ụda, ndozi atọ, na akwụkwọ.
The Super-Saber F-100 North America bụ akụkụ nke ọgbọ mbụ nke ndị agha America bụ ndị agha a maara dị ka Century Composers, ya na ndị òtù Soviet nke Mikoyan-Gourevitch MiG-19 Farmer. A na-akpọ ụgbọelu a Hun (mkpesa ọtụtụ narị na-ezo aka na aha ya "F-100") site na ndị na-anya ụgbọelu ndị nwere ekele maka ya. E wuru ihe karịrị 2,000, F-100 nwere ogologo ọrụ ma jiri 1982 site Turkey. (Wikipedia akwụkwọ)
kere 22 Feb 2019
emelitere 23 Feb 2019
Nkịtị Warbirds Kere Team, ngwugwu na ntọala nke LLS